Manampy alikaola amin'ny e-jus azo antoka
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Manampy alikaola amin'ny e-jus azo antoka
manampy alikaola amin'ny e-ranom
Ny fanampiana alikaola amin'ny e-ranom dia tena izy, fa tsy dia malaza loatra. Araka ny fantatsika rehetra, ny alikaola dia mora mirehitra ary ny penina vape dia miteraka hafanana ao anaty coil, ka izy roa ireo dia mety hiteraka afo. Mba hisotroana toaka soa aman-tsara, ny olona dia mamorona sifotra etona, izay antsoina koa hoe fanala. Mora be ny mampiasa azy ary azo antoka ihany koa.
Azonao atao ny manalefaka ny alikaola amin'ny alàlan'ny sehatry ny etona. Raha misotro alikaola ianao dia hafa ny fahatsapana. Raha mampiasa an'ireto dingana ireto ianao mandritra ny fanandramana efatra na dimy, dia mahatsapa ho tsara amin'ny alikaola alikaola ianao. Rehefa zatra izany ianao dia ho afaka hifehy ny buzz anao mora kokoa. Vaporizer Alikaola tsy mahazatra. Raha te hanao izany ianao dia manaova fikarohana tsara. Tsy mahalala betsaka momba izany, azafady aza manao zavatra hafahafa na ratsy.
Ahoana ny fampiasana ny sehatry ny etona mba hampihena ny alikaola
Voalohany, makà labozia sy jiro kokoa noho ny fandrehitra ny labozia fotsiny. Raiso ny labozia, apetraho ao anaty kaopy, avy eo mitazona kaopy amin'ny zoro 45 degre ary avelao hidina miadana miadana ao anatiny ilay labozia. Raha vantany vao ao anaty labozia dia ny mameno alikaola fotsiny ny tontolonao. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fantsom-by vy sy fametrahana azy ao anatiny, toy ny fisotroana alikaola.
Ararakao amin'ny onjampeo iray na antsasaky ny alikaola ao anaty cornel ianao dia izay no izy. Raisinao ny fantsom-batana hamoahana azy eo ambony ary afaka efatra minitra dia vonona ny hanomboka ny alikaola ianao. Ankehitriny, ity fantsona ity dia noforonina mora ary hipetraka eo ambonin'ny tampon'ny mololoo io. Tsy mila miahiahy momba ny fahaverezana na ny tsy fitadiavanao ny fantsonao ianao; afaka mijanona amin'ny sehatry ny etonao ianao na aiza na aiza itondranao azy. Ny hevitra dia ny hananana zavatra izay hazoninao toy ny fitaratra mahazatra sy mora foana.
Toy ny zava-pisotro mahazatra aorian'ny fametrahana ny sphere eo ambonin'ny labozia. Andraso mandritra ny efatra minitra dia ho hitanao ny fifehezana miforona ao anatin'ny sehatra. Mampahafantatra anao izany fa misy etona izao ao anatin'ny sehatra ary vonona ny handray. Ny hany mila ataonao dia raiso ny mololo, esory avy ao anaty ranon-javatra izy ary atsofoka ao anaty havokavoka ny etona fa tadidio ny tsy miaina ao anaty havokavokao mankany amin'ny vavoninao. Raha atsofoka ao an-kibonao ny etona dia tsy hahazo ilay vokatra irina.
Mitady zavatra tsotra ianao satria ny vera mahazaka hafanana dia mamela anao hihazona izany toy ny fisotro mahazatra ihany. Isaky ny te-hankafy bebe kokoa ianao, ny zavatra ilainao hatao dia ny mandray ny mololo ary manala azy avy ao anaty ranoka ary mifoka ireo etona.
Matetika dia mitaky fanandramana efatra na dimy eo ho eo ny fahaizana alikaola etona. Rehefa zatra izany ianao dia ho afaka hifehy ny buzz anao mora kokoa. Raha somary sahirana ianao, makà fotoana bebe kokoa eo anelanelan'ny aotinao manaraka. Ary koa, mihalasa saina ianao. Maka iray hafa ianao ranona vape voa. Azonao atao ny milaza fa ny antsasaky ny ondran'ny alikaola dia haharitra eo amin'ny 40 minitra ny etona, noho izany aorian'ny fanaparitahana ny alikaola mandritra ny 40 minitra dia maniry ny hanaisotra ny faritra ambony ianao, esory ny mololo, araraka ny alikaola ary soloinao.
Mandrosoa ary apetaho amin'ny vodin-tany ny mololo ary apetrakao eo ambonin'ny labozia.
Afaka maharitra efatra minitra ary ho vonona hifoka indray ianao. Rehefa manaloka alikaola ianao dia malefaka kokoa sy tsy masiaka kokoa ny tsiron'ny alikaola noho ny misotro alikaola.
Ny fampidirana alikaola be loatra ao anaty vapeo dia mety hampidi-doza loatra amin'ny fahasalamanao. Fa raha te-hahatsapa ny fientanam-po ianao dia ampio kely hahalalana fa afaka mandray ny tsindry ny vatanao.